Ny fiaran-dalamby izay miainga avy any London mankany Paris dia iray amin'ireo haingana indrindra any Eoropa. Nosoratan'i Eurostar, azonao atao ny maka ny tenanao avy any Royaume-Uni ka hatrany Frantsa ao anatin'ny roa ora sy enina ambin'ny folo minitra fotsiny. Izany dia manome anao mihoatra ny fotoana ampy matory ao, manao ny fiaran-dalamby ary hankafy a fitsangatsanganana andro any an-drenivohitra frantsay. Ento kitapo sy mandifotra ny Louvre – na mankafy fotsiny ny hatsarana rehetra atolotry ny Paris.
Efa niresaka momba an'i Roma izahay, fa Milan kosa tanàna hafa mahafinaritra any Italia. Tsy mitovy amin'ny atsimon'i Italia toy ny paoma ny voasary, Milana maoderina i Milan. Fantatra noho ny fodiana avo lenta sy avo lenta, fijanonana ny tanàna mandritra ny fialan-tsasatra italiana. Na dia tsy mitovy amin'ny Ranomasina Mediterane aza ny toetrandro, mbola afaka mankafy ny maritrano tsara tarehy ary na tranom-bakoka na roa isaky ny taona.
Tsy maintsy fialan-tsasatra Eropeana, I Hamburg sy Copenhagen dia mety tsy ny tanàna voalohany tonga ao an-tsainao momba ny fizahan-tany. Henatra be izany, anefa, satria samy manana tantara sy lakan-kano marefo ireo tanàna roa ireo. Hamburg dia tanàna lehibe seranan-tsambo any avaratr'i Alemaina. Mety efa naheno an'izany teo aloha ianao noho ny fifandraisany amin'ny sakafo malaza malaza hamburgers. Fun zava-misy – ny olona monina ao Hamburg dia antsoina koa hoe Hamburgers.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Eran-tany momba ny làlan-dalamby lalamby any Europe” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-route-maps-guide/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)